I-GPS033W-Ukujonga okungangeni manzi kwe-GPS yabantwana abancinci kunye nabantwana abane-Autism -Whatsapp yeVidiyo yokuSebenza (eNTSHA) -Izisombululo ze-OMG
I-GPS033W-Ukujonga okungangeni manzi kweGPS yabantwana abancinci kunye nabantwana abane-Autism -Whatsapp yeVidiyo yokuSebenza (ENTSHA)
Abantwana abane-Autism kunye nezinye iimfuno ezizodwa banokuba ngabangathethiyo kwaye banokuba nobunzima ekunxibelelaneni nabantu. I-OMG GPS Tracker sisisombululo esweni esenzelwe abazali be-autism. Xa umntwana one-Autism ezulahleka, umzali unokujonga nje indawo kwi-App ekhutshelwe kwi-Smartphone. Akukho sidingo sokuqala ukubiza amapolisa okanye abamelwane ukuzama ukufumana umntwana olahlekileyo.
Ngoncedo lwetekhnoloji ye-GPS eziwotshi ziyakwazi ukuxelela indawo yomntwana ngenqanaba elimangalisayo lokuchaneka. Usebenzisa iApp kwi-Smartphone yakho, vele ukhuphe imephu kwaye uya kuba nakho ukubona indawo ekuyo umntwana.
Iwotshi zinokufumana imiyalezo yelizwi, oko kuthetha ukuba abazali banokurekhoda umyalezo welizwi kwaye ngokuzolileyo bacele umntwana one-autistic ukuba abuyele ekhaya.
Zininzi nezinye izinto ezintle eziza nezi zixhobo, ukuqinisekisa ukuba abantwana bakhuselwe ngokupheleleyo ngamaxesha onke. Ezinye zezi zibandakanya:
Iqhosha likaxakeka leSOS, elinokusetyenziswa ngumntwana ukuba akafikeleli kuye; Kukho amanani acwangciswe kwangaphambili aza kuthi aziswe xa iqhosha licinezelwe.
Ijelo leendlela ezimbini zonxibelelwano ezivumela abazali ukuba banxibelelane nomntwana kwaye bamcele ukuba angasuki kule ndawo akuyo ngoku. Kwimeko yomntwana o-Autistic, isandi selizwi eliqhelekileyo lanele ngokwaneleyo ukudala ukuzola, kwaye abanye banokufika kuye ngokulula.
Ukubiyelwa ecaleni kwegeo lelinye uphawu elibaluleke kakhulu kwimeko yomntwana we-Autistic. Oku kuvumela umzali ukuba asete umjikelezo apho umntwana kufuneka ehlala kuwo. Ukuba umntwana uqhubela phambili kule perimeter, kuthunyelwa isilumkiso kwifowuni yomzali.
I-GPS + AGPS + LBS + WIFI Indawo kwiMephu
I-APP yefowuni okanye i-computer ye-GPRS iqonga, zombini indlela yokulawula umlindi.
I-GPRS yangoku-time yokufumana, ukulandelela kunye nokubeka iliso (Ukunakekelwa kwezwi)
Iifowuni zeeFowuni ezimbini
Abantwana bemfundo yokuqala
Ifowuni ye-SOS yoxinzelelo
Izaziso zeBhettery eziphantsi
ID imathiriyeli ABS + PC
screen IPS isikrini
Umlindi wobukele I-silicon strap
umbala Pink, eluhlaza
ubungakanani (Mm) 232 * 42 * 17mm
battery I-Voltage 5.0V
Ixesha lokuthetha iiyure 4
Uhlobo Lwebhetri Iklasi ye-bhetri ye-polymer ehlawulelwayo
screen uhlobo IPS
ubungakanani 1.4 ''
IC chipeet ICPU MTK 9820E
isandi umsesane ewe
Susa isandla Ewe
Somlomo Ewe i-0916high esemgangathweni yesithethi
Ifowuni ye-Mic Ewe 4.0 * 1.5 umnxeba
Dock Ikhefu lomlomo Hayi
Umthwalo wokuhlawula Ukutshaja kweMagnetic
Slot khadi slot Nano SIM
woluvo G-sensor Ewe
Susa ukuthathwa Inzwa yokukhanya Hayi
omnye eriyali I-antennas ye GSM efakwe
Indawo yeMephu IGPS Ewe
Ulwazi loLwazi Icon nganye yeVidiyo yokufowuna Ewe
Inombolo yefowuni EWE (i-10 inzala yeefowuni)
App IOS + Android usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows Ikholi yefowuni ewe
Iindlela ezimbini zokunxibelelana Ewe, inombolo yomphambukeli engaphazamisiyo
Iveki yezwi Ewe
Ixesha lexesha Ukusetyenziswa kweencwadi
Geo-fence 3 iyatholakala
umfanekiso layisha umfanekiso wesithombe okhoyo kwikhamera okanye kwi-albhamu yezithombe
Isaziso seAlarm I-SOS kunye nebhetri ephantsi, ucingo lwe-Geo
embali Idatha eyi-1 yembali ekhoyo
Dlala kwakhona ok u kudlala umzila wembali
ukuchaneka I-LBS, 100-500meter, iWIFI, 30-50meter, iGPS 5-10meter
Ukubeka esweni isimo sebhetri Ewe
Ixesha elisebenzayo kunye ne-intanethi Ewe
27859 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje